ကောင်းကောင်း မအိပ်ခဲ့ရတဲ့ အတ္တလန်တာ ၊ နယူးကာဆယ် နည်းပြသစ် ၊ စာချုပ်သစ်ချုပ်မယ့် ဖာတီ တို့နဲ့ . . . ယနေ့အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
နယူးကာဆယ် အသင်းဟာ ဒီကနေ့ နံနက်ပိုင်း မှာ နည်းပြ စတိဗ် ဘရုစ် နဲ့ ၂ ဦး သဘောတူ စာချုပ် ဖျက်သိမ်းကာ လမ်းခွဲခဲ့ အပြီး မှာတော့ နည်းပြသစ် ရှာပုံတော် ဖွင့်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
လက်ရှိ မှာတော့ စပါး ကို ရောက်ဖို့ နီးစပ် ခဲ့တဲ့ ရိုးမား နည်းပြဟောင်း ပေါ်လို ဖွန်ဆီကာ က ရေပန်း အစားဆုံး အဖြစ် ရှိနေပြီး ဖွန်ဆီကာ ကိုယ်တိုင် ကလည်း ပရီးမီးယားလိဂ် ကို စိတ်ဝင်စားမှု ရှိနေတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
နယူးကာဆယ် အသင်းကတော့ ပရိသတ်တွေကို ပိုင်ရှင်သစ် ဆော်ဒီ လုပ်ငန်းရှင်တွေ ရဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းက ရိုးရား ဝတ်စားဆင်ယင်မှုတွေ ကို လိုက်လံ တုပ ဝတ်ဆင်ခြင်းတွေ မပြုလုပ်ဖို့ တောင်းဆို သွားတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ အသင်းဟာ လူငယ် တိုက်စစ်မှူးလေး အန်ဆု ဖာတီ ကို စာချုပ်သစ် ချုပ်ဆိုဖို့ ဆွေးနွေးမှု အဆင်ပြေ နီးစပ် နေပြီလို့ သိရ ပါတယ် ။ ဘာစီလိုနာ ဟာ ဖာတီ ကို ကာလရှည် စာချုပ် ချုပ်ဆိုမှာ ဖြစ်ပြီး ပီဒရီ ကဲ့သို့ မြင့်မားလှတဲ့ စာချုပ်ဖျက်သိမ်းကြေး ပါရှိမယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
ဥရောပ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဆီဖာရင် ကတော့ ဖီဖာ ရဲ့ ၂ နှစ် တကြိမ် ကမ္ဘာ့ဖလား ကျင်းပမယ့် အစီအစဉ် ကို ကန့်ကွက်ကြောင်း ထပ်မံ ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။ လက်ရွေးစင် အသင်း အချို့ ဟာလည်း ဖီဖာ ရဲ့ အစီအစဉ် ကို ကန့်ကွက် ထားကြပြီး အတင်းအကြပ် ပြုလုပ် လာပါက ဖီဖာ ရဲ့ လက်အောက် ကနေ နှုတ်ထွက်ဖို့ အထိ ပြင်ဆင် ထားတယ်လို့ ပြန်လည် သတိပေးသွားခဲ့ ပါတယ် ။
အက်စတွန် ဗီလာ နဲ့ အင်္ဂလန် တိုက်စစ်မှူးဟောင်း ဂါဘရီရယ် အဘွန်လဟော် ကတော့ “ရိုနယ်ဒို တောင် တပတ် ပေါင် ၅ သိန်း ရနေတယ်ဆိုရင် မိုဆာလာ က ဘာလို့ မရသင့်ရမှာလဲ” လို့ ပြောဆိုကာ လီဗာပူး ရှေ့တန်း ကစားသမားရဲ့ စာချုပ်သစ် အပေါ် ထောက်ခံ ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး နည်းပြကြီး နူနို ဆန်းတိုစ့် က ပြီးခဲ့တဲ့ နယူးကာဆယ် နဲ့ ပွဲမှာ ပါဝင် ကစားခဲ့သူတွေ ထဲက ၁၀ ဦး ကို နယ်သာလန် ကလပ် ဗွီတက်ဆီ နဲ့ ကစားမယ့် ယူရိုပါ ကွန်းဖရန့်လိဂ် ပွဲစဉ်မှာ ချန်လှပ် အနားပေး သွားမယ်လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဒီကနေ့ညမှာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းနဲ့ ကစားဖို့ အတွက် မန်ချက်စတာ ကို ရောက်ရှိ နေတဲ့ စီးရီးအေ ကလပ် အတ္တလန်တာ ကစားသမားတွေဟာ တည်းခိုနေတဲ့ ဟိုတယ် က မီးအန္တရာယ် အချက်ပြ ခေါင်းလောင်း ၆ ကြိမ်ခန့် ပေါ်ထွက် ခဲ့တာကြောင့် ကောင်းစွာ မအိပ်စက် ခဲ့ကြရဘူးလို့ သိရ ပါတယ် ။
အဆိုပါ ဟိုတယ် ဟာ မနက် ၄း၅၁ နာရီ ၊ ၅း၀၀ နာရီ ၊ ၅း၃၆ နာရီ ၊ ၆း၁၁ နာရီ ၊ ၆း၃၁ နာရီ နဲ့ ရး၁၃ နာရီ တွေမှာ မီးဘေး အချက်ပြ သတိပေးသံ မြည် ခဲ့တာလို့ သိရ ပါတယ် ။
တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး ၊ အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် ၊ ဒေါ့မွန် နဲ့ ဝက်စ်ဟမ်း အသင်းတို့ဟာ ဘယ်လ်ဂျီယံ ကလပ် ဂျန့် အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှူး အိုနူအာချူ ကို အပြိုင် စိတ်ဝင်စား နေကြတယ်လို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဖီဖာ ကော်မတီ ဟာ လာမယ့် နိုဝင်ဘာ လ အတွင်းမှာ ကလပ် ကမ္ဘာ့ဖလား ကျင်းပဖို့ ကိစ္စ အတွက် ဆွေးနွေး သွားမယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ကိုဗစ် ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ဂျပန်မှာ ပြုလုပ်မယ့် ဒီနှစ် ကလပ် ကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲကို ရွှေ့ဆိုင်း ထားပြီး အိမ်ရှင်သစ် ကို မရွေးချယ် ရသေးပါဘူး ။ ယူအေအီး ကတော့ သူတို့ ဟာ ကလပ် ကမ္ဘာ့ဖလား ကို လက်ခံ ကျင်းပ ပေးနိုင်ကြောင်း အဆိုပြု ထားတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
စပါး အသင်းနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ် အတွင်း ရုတ်တရက် နှလုံးဖောက်ကာ လဲကျ ခဲ့တဲ့ အသက် ၈၀ အရွယ် နယူးကာဆယ် ပရိသတ်ဟာ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ ပြန်လည် ကောင်းမွန် လာပြီလို့ သိရ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ အသင်းကတော့ လက်စတာ စီးတီး ရဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယံ ကွင်းလယ်လူ တိုင်လီမန်းစ် ကို လာမယ့် နွေရာသီမှာ ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားမှု ရှိနေတယ်လို့ သတင်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကွင်းလယ်လူ ဖရက်ဒ် ဟာ အသင်းနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ် ခဲ့ပေမယ့် ကိုဗစ် အနီရောင်ဆင့် သတ်မှတ် ခံထားရတဲ့ ဘရာဇီးကနေ ပြန်လာခဲ့သူ ဖြစ်တာကြောင့် ဒီကနေ့ည ကစားမယ့် အတ္တလန်တာ နဲ့ ပွဲမှာ ပါဝင် နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ သိရ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ဗြိတိန် ရဲ့ ကိုဗစ် အနီရောင်ဆင့် သတ်မှတ်ချက် ကနေ ဖြေလျော့ ခံလိုက်ရတဲ့ ယူရဂွိုင်း ( ဥရုဂွေး ) ကနေ ပြန်လာတဲ့ တိုက်စစ်မှူးကြီး ကာဗာနီ ကတော့ ဒီညပွဲ ကို ပါဝင် ကစားနိုင်မယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ခင်ဗျာ . . . ။
Previous Article မန်ယူနိုက်တက် vs အတ္တလန်တာ ၊ ချဲလ်ဆီး vs မယ်မို တို့ရဲ့ UCL ပွဲစဉ်တွေနဲ့ ယူရိုပါလိဂ်ပွဲစဉ်တွေကို ခန့်မှန်းလိုက်တဲ့ အိုဝင်
Next Article တွဲဖက် ကစားဖူးသမျှ ကစားသမားတွေထဲမှာ အကောင်းဆုံး အသင်းဖော်ကို ထုတ်ဖော် ပြောကြားလိုက်တဲ့ အွန်နရီ